သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အိမ်ခြေမဲ့ တစ်ယောက်အကြောင်း
25 Comments »from Ainchannmyay.com
Translation အရမ်းကောင်းးးးးးးးးးးးး :D
Comment by minthant2009 — December 23, 2009 @ 12:08 pm
ဒီက အိမ်ခြေမဲ့တွေကိုတော့ ဘုရားသခင်က မေ့နေတယ်ထင်တယ်။
Comment by mm — December 23, 2009 @ 1:47 pm
စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းလေးကို လာရောက်ဖတ်သွားတယ် မမရေ….မအားလို့ ခုမှရောက်ဖြစ်တယ်း)
Comment by နှင်းဟေမာ — December 23, 2009 @ 5:49 pm
ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ သကြားမင်းလူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး ကယ်တယ်ပေါ့ ။ သူတို.မှာကျ ဘုရားသခင်များလား မလေးရေ…း)
Comment by amayarko — December 23, 2009 @ 6:50 pm
စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးပဲ မအိမ့်ရေ။ Merry X’mas နော်။
Comment by ဇှန်မိုးစက် — December 23, 2009 @ 7:36 pm
ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးလေးပဲဗျာ…။ ကျေနပ်သွားမိတယ်…။ မမျှော်လင့်ရဲခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေဟာ…. တစ်ချိန်ချိန်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်ရှင်သန်လာတတ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ (ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ယက်ပြီး) တွေးမိသွားတယ်ဗျာ….။ ဝေမျှပေးထားတာ တစ်ကယ်ကျေးဇူးးးးး…။
Comment by ဏီလင်းညို — December 23, 2009 @ 8:34 pm
ကူညီတတ်တဲ့ ဝိညာဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
Comment by သိင်္ဂါကျော် — December 24, 2009 @ 12:20 am
Merry Christmas and Happy New Year Ma Lay..
the story touch the heart.
Comment by K — December 24, 2009 @ 1:02 am
မလေးရေ….. ဖတ်လို့ကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းတယ်နော်။ ဒါဆိုရင် ဂျင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို့ ပိုတွေးမိစရာ ဖြစ်သွားတယ်နော်။ ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာ ကောင်းသလို လူတိုင်းလည်း မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းလေးပါ။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — December 24, 2009 @ 4:56 am
ပို့စ်လေးက ကောင်းတယ် ။ ဟက်ပီး မယ်ရီခရစ်စမတ်ပါ ။
Comment by Republic — December 24, 2009 @ 8:23 am
˚˛ * Π__*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛
ဒါမျိုးလေး ဘာသာပြန်ထားတာ ဖတ်ရတာကောင်းတယ်ဗျ ၊
Comment by ဒေါင်းသေချာင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — December 24, 2009 @ 1:20 pm
မလေးရေ … ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် ဖြစ်ပါစေ …
Comment by MDW — December 25, 2009 @ 2:48 am
Comment by ပီယာ — December 25, 2009 @ 10:48 am
အရာရာကို လွမ်းစရာအဖြစ်ခံစားနေတာ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လွမ်းစရာကောင်းပါတယ်. သိပ်ကြာလာရင်တော့ လူက ထိုင်းမှိုင်းလာတတ်ရောဗျ.
Therefore, သိပ်မလွမ်းနဲ့ မလေးရေ….
Merry Christmas လာလုပ်တာဗျ.း) ဘာကျွေးမှာလဲ.
ပြောသာပြောရတယ်. ကျွန်တော်လည်း ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် ဘာလုပ်ရမယ်မသိပါဘူးဗျာ. ပြောရင်းနဲ့ လွမ်းသွားပြီ.. အဟတ်…
Comment by Yan — December 25, 2009 @ 9:55 pm
အမက ဘာသာပြန်တော်တယ်ဗျာ။ facebook မှာမတွေ့ လို့ ဒီကို လိုက်လာပြီး အားပေးလာတာပါ။
Comment by zwesoelwin — December 28, 2009 @ 1:02 am
Comment by aye chan koko — December 28, 2009 @ 2:10 am
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မလေးရေ
Comment by မွန်းသက်ပန် — December 30, 2009 @ 1:23 pm
မင်္ဂရှိသော နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါစေ …။
Comment by စံလင်းထွန်း — December 31, 2009 @ 8:02 am
Comment by minthant2009 — December 31, 2009 @ 8:07 am
အိမ့်ရေ… အိမ့်ရဲ့ စတိုင်လေးအတိုင်း သဲထိတ်ရင်ဖိုလေးနော်… ဒီလို ပို့ စ်ကောင်းကောင်းဖြစ်ပေါ်အောင် နှိုးဆော်တဲ့ စိတ်ကူးလေးကို ဘဘောကျတယ်…
ချစ်ညီမလေးအိမ့် နာမည်လေးအတိုင်း ချမ်းမြေ့ပျော်ရွင်ကြည်နူးဖွယ် နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ …
Comment by တန်ခူး — December 31, 2009 @ 9:58 am
နှစ်သစ်မှာ အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေနဲ့ ပိုပြီး သစ်လွင်တောက်ပြောင်ပါစေ မလေး ရေ
Comment by ပန်ဒိုရာ — December 31, 2009 @ 10:08 am
ရင်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်နဲ့ ငိုချင်သလိုလို၊ ပျော်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်။
Merry Christmas and Happy New Year ညီမလေး။
Comment by Htate Htar(လရိပ်သာ) — December 31, 2009 @ 4:05 pm
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မမရေ….။
Comment by သစ်သစ် — December 31, 2009 @ 6:29 pm
ပျော်ရွှင်စရာ…၊ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ နှစ်သစ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ…။ အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ ကျွန်တော့်အစ်မကိုသတိတစ်ရနဲ့ လာဆုတောင်းနှုတ်ဆက်တာပါဗျာ…။
Comment by ဏီလင်းညို — December 31, 2009 @ 7:27 pm
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ မအိမ့်ရေ။
Comment by ဇှန်မိုးစက် — December 31, 2009 @ 9:14 pm
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:03 AM